Beer Route - Best Beers In Europe By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > Beer Route – Best Beers In Europe By Train
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Ungave uri doro anoda vachitsvaka kutora yenyu chido pamusoro mugwagwa kana iwe watova rwendo Europe pamusoro mabhuku, take a look at the Beer Route nechitima – Best Beers mu Europe By Train. Iwe haangaodzwi mwoyo! Even nani, mumwe nomumwe mazano dzedu nyore asvika nechitima. Aihwa kutyaira zvakakodzera, izvo zvinoreva hapana zvinokunetsa. Just mafaro!
Beer Route By Train – Best Beers In Europe: At The Train Station!
Chinhu chimwe chete chaungasaziva ndechekuti hwahwa hwakanaka Route nechitima inogona kuwanika zhinji chitima dzemapurisa. The Sheffield Tap mumwe yakanakisisa, uine pamusoro 30 casks uye drafts - zvimwe anoratidza pazviridzwa kubva omunharaunda uye nekaupenyu kujeka doro. Unogona kuwana muchitima uende kushanyira vamwe vavo ... kana kungogara kuisa uye kupedza nguva yakawanda zvakabudiswa pavo. How tonhorera?!
Beer Route By Train – Best Beers In Europe: Delirium Village muna kweBrussels, Bherujiyamu
ikozvino, uyu ndiye munhu kuti ini pachangu zvakava pandakashanyira kweBrussels uye murume wangu akanga pautumwa kuwana Best Beers mu Europe. muromo: Teverai pingi nzou!
Ndiri anobva Chamhembe Afrika uye akanga kunzwa zvishoma funga kumba pakushanyira kweBrussels. saka, Ndakarayira pachangu ndiri Castle Lite kubva pamba. Ehe saizvozvo, vaiva nawo unganidza! Izvi hazvishamisi sezvo delirium Cafe inozivikanwa refu doro Pamazita, akamira 2,004 siyana pezvitsiga muna January 2004 yakanyorwa Guinness Book of Records. On chipo muri beers kubva pamusoro 60 nyika!
Kubhawa iri muna mukoto duku rinonzi Chipangamazano chaVa the Fidelite / Getrouwheidsgang, chete vaviri zana metres kubva Place Grand. The Jeanneke Pis chifananidzo iri pamhiri pomugwagwa pamukova.
bhaa zita The rinobva doro sokumborasika pfungwa uye kubvunda, ane chiratidzo chepinki nzou chinoshongedzawo mukova wecafe.
Chiteshi chechitima i 10 miniti vanofamba kubva Datenroku, saka hazvishamisi chiri pamusoro Beer Route nechitima – Best Beers mu Europe.
Luxembourg kuna kweBrussels Zvitima
Antwerp kuna kweBrussels Zvitima
Amsterdam kuna kweBrussels Zvitima
Paris kuna kweBrussels Zvitima
Beer Route By Train – Best Beers In Europe: Ye Olde Cheshire Cheese mu London, England
Tinoda nhoroondo kuti unouya ichi vachinwa rwendo. chokwadi, the pub ichi haana chikuru kusarudza zvichienzaniswa vamwe vavakidzani vayo. Asi chii isina yakawanda zvinoita nokuda rayo unhu nhoroondo ndaisa. Vanotaura vanoti mamongi brewed panzvimbo zvisati akava bhawa. Samuel Johnson uye Charles Dickens akanwa pano, saka unenge vachidya bika nhoroondo pa chemabhazi ichi.
Pokugadzwa iri parizvino anazvo ne Sam Smith Old Brewery. Pubs dzavo ndivo vanoenda-kuti nokuda ezvivako, zvetsika ales, uye inodziya zvemukati. Hapana pezvitsiga makuru, chete penya zvipiriso kubva yavo bhurure muna Tadcaster, Yorkshire.
Beer Route By Train – Best Beers In Europe: Rinonzi pilsner Urquell Brewery muna Pilsen, Czech Republic
Kunyange bhurure yave modernized kubva 1993, makiromita kwegura wedzimba dzakasara pachivande Chikamu rwokuparidza. Ramble repasi pevhu rinogumira pakuvhurika kwedanda rakavhurika uye akati wandei emabharani mahombe erudzi ayo aishandiswa kuchembera ese Pilsner Urquell.
The doro kubva kwenzwi mudungwe Super dhiramu iri, zvikuru nyore, yakanakisisa Lager doro hatina nokusingaperi vakaravira. Uye iwe unofanira kuedza naro woga! The rinonzi pilsner Urquell Brewery anokukumbira kuti kutora rakasiyana runobudirira. Uchashongawo ruzivo kutsika uye varaidzo zviri munhau wedzimba, kudzidza pamusoro pakubika doro uye vanowana vakaisvonaka Lager, ehe saizvozvo!
Beer Route By Train – Best Beers In Europe: Jerimani (NOT Munich)
tinogona kurega here pane pakavanda? The yakanakisisa doro mu Germany ndiyo kwete mu Munich. Germany ane isingaverengeki vakasiyana-siyana aakatipa beers. Kunyange vakawanda nyika brews ose vari zvinoshamisa zvakanaka. Asi kwete doro ose anogona kuva chakanakisisa, kunyangwe munyika umo doro iri ngano. Kana uri kutsvaka-siyana uye unoda doro wako nemaitiro uye sizzle, kuita pachako nyasha uye kuronga kushanyira kunzvimbo yekuBavaria yekumashure, apo doro ndiyo chikamu mutsika uye brewed nevanhu chaivo vane nyaya kuudza.
KuCologne muFrankfurt Zvitima
Munich kuna muFrankfurt Zvitima
Hanover kuna muFrankfurt Zvitima
Hamburg kuna muFrankfurt Zvitima
tatamuka iyi ndima kuMabvazuva reMunich kunosvika kuburikidza Bavarian Forest kune yeAustria uye Czech borderlands uye mumwe wavaduku akafamba kumatunhu Germany. Izvi chete zvinoita Lower Bavaria anokwezva rwendo, asi nhoroondo uye tsika doro kuti chinotofadza.
Makumi manomwe rimwe diki uye epakati saizi mabhawa kushanda muchikamu ichi Bavaria. Vamwe vavo ndeyemunguva 1400s. Gumi vakanga kana anosimbisa kereke, chomurume dzemamongi, kana vaiva ne kwamachinda. Three dzichiri kushanda ne NaAmai Pauline Kabanzi German uye ndiye dangwe Abbey bhurure munyika. dzikisa Bavaria ndiyo pfuma yakavanzwa kana totaura doro.
Unoda kuwana Best Beers mu Europe? (Musoro Ichokwadi!) Zvadaro bhuku rwendo wako Save A Train Hapana peaky zvakavanzika mari, izvo zvinoreva mari yakawanda kuti doro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-beers-route-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Beer #BeerinEurope #beers bere Travel travelbytrain
Best Destinations In Europe To Travel Munguva A Weekend
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe